Tatoazy ala, ho an'ireo tia natiora | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy ala ho an'ny tia natiora sy fiainana salama
Susana godoy | | Tatoazy voninkazo sy zavamaniry
Raha misy tatoazy izay tiako foana ary manaitra ahy ny mahita ny hoditry ny olona dia rehefa misy tombokavatsa ala amin'ny hoditr'izy ireo. Raha vita tsara ny tatoazy dia indraindray toa sary. Tiako indrindra ny ala amin'ny alina izay aloky ny maizina no manana toerana lehibe indrindra.
Misy ny olona misafidy ala hametrahana hazo, fa misy ihany koa ireo mankafy manampy singa hafa amin'ny endrika, ahoana no ahafahan'izy ireo ho biby amin'ny alina, amboadia, kintana sns. Raha tianao ny tombokavatsa misy ny tontolo na ny natiora amin'ny ankapobeny, dia azo inoana kokoa fa ny tatoazy ala dia anao koa.
Ny tatoazy amin'ny ala dia matetika maneho ny fitiavana izay tsapan'ny olona amin'ny fiainana ary mankany amin'ny natiora. Ary eto amin'ity izao tontolo izao ny olona no misaotra azy ary noho ireo hazo sy ala dia manome rivotra madio ho antsika rehetra izay miaina amin'ny alàlan'ny oxygen.
1 Tatoazy izay ampahany amin'ny natiora
2 Tatoazy voajanahary, majika kely
3 Simbolojika kely
4 Aiza no ahazoana tombokavatsa ala
5 Tatoazy voajanahary hafa
5.1 Tatoazy enchanted
5.2 Tatoazy an-tendrombohitra
5.3 Tatoazy ala kesika
6 Sarin'ny tatoazy an'ala amin'ny sandry
7 Sarin'ny tatoazy an'ala amin'ny tongotra
Tatoazy izay ampahany amin'ny natiora
Ny ala dia efa nanjary natiora na dia mbola tsy nisy akory aza ny olona. Nanomboka tamin'ny vanim-potoana talohan'ny tantaram-piainana, toerana nonenan'ireo zavamananaina taloha ... ny ala no fonenan'ireo zavaboary ireo. Ho an'ity Ho an'ny olona maro, ny ala dia fitoerana masina.
Izy io dia mariky ny fiainana, fitoniana, famelomana aina ary maro hafa. Ny hevitry ny ala dia nivelatra sy nihalehibe tamin'ny fandehan'ny fotoana ary midika izany fa amin'ny vanim-potoana maoderina, ny ala dia mbola midika zavatra maro, ary noho izany antony izany ... dia tsara ny manao azy amin'ny tatoazy.
Be ala ny fiainana amin'ny ala ary manaitra antsika ny zava-miafina. Ny ala dia mety hidika zavatra maro amin'ny olona iray sy iray hafa, ny mifanohitra amin'izay indrindra no izy. Ananan'ny fahefan'ny artista ny manao tatoazy mahavariana ary avelao hihamafy ny dikany. Na ny karazana hazo voafidy amin'ny famolavolana aza dia mety misy dikany hafa noho ny karazan-kazo hafa voafantina.
Misy ny olona tia manambatra ny karazan-kazo mba tsy hitovizany ny heviny ary malalaka kokoa ny tandindona. Ny olon-kafa dia aleony manampy singa izay mahaliana kokoa ny endrika ary ny dikany lalina indrindra.
Ny ala sy ny hazo dia tena mitovy amin'ny fiainantsika ... manana fotoana iainana hiaina tsingerina amin'ny endrika fanamby ary koa fahatsiarovana. Izy io dia azo ampitahaina amin'ny vanim-potoanan'ny hazo sy ny fiovany rehefa mandeha ny fotoana. Ohatra, ny fararano dia fotoana mangina sy milamina, avy eo tonga ny ririnina masiaka izay toa maty daholo ny zavatra rehetra ... fa avy eo tonga kosa ny lohataona miaraka amin'ny fahaterahana indray sy fanantenana, miaraka amin'ny hatsarana sy fahasambaran'ny fahavaratra izay ho avy avy eo.
Ny vanim-potoanan'ny taona anaovana ny tombokavatsa dia mety hanome dikany vaovao ihany koa amin'ny tatoazy ary na dia mitantara tantara aza.. Ny sary dia mety manana antsipirihany isan-karazany, nefa mety hisy heviny lalina koa.
Ny zavatra tsara momba ireo tombokavatsa ireo dia rehefa vita izany, ny fahaizana mandinika dia fanomezana ho an'ny maso. Toa majika izay manampy antsika ho salama tsara sy hitondra ny tenantsika mankany amin'io toerana io, ahafahantsika manao ny fandinihantsika manokana ny feon'ny fieritreretantsika, izay ahafahantsika mitombo sy tsara kokoa. Betsaka ny endrika ara-panahy noho ny hafa, misy koa ny maizimaizina, ka mety hiteraka tahotra ianao. Ny zava-dehibe dia ny fahatsapanao ny endrika nofidinao.
Tatoazy voajanahary, majika kely
Ho an'ny olona maro, ny tombokavatan'ny ala dia mety hanan-kery majika iray, satria an'arivony taona maro ny ala no protagonista tantara, angano ary koa fombafomba.. Any anaty ala dia misy zavaboary majika foana, zavaboary ara-panahy ... na mijery ny lafiny ilan'ny farantsakely aza ... zavaboary mampihorohoro izay alina ihany no nivoaka mba hampitahorana ireo niharan'izy ireo.
Fa ny tena izy dia ny tatoazy ala dia fomba iray hankafizana ny fifamatorana ananan'ny zavamananaina rehetra miaraka amin'ny Reny Tany, hiverina amin'ny fiaviantsika, hitadidy fa iray isika rehetra ary ny natiora dia fonenantsika.
Ny tatoazy anaty ala dia afaka mampifanaraka ny dikany sy ny marika isan-karazany, toy ny làlan'ny fanadiovana renirano na ny tanjaky ny tendrombohitra. Angamba ho anao dia midika koa izany hoe ny andriana avy amin'ny ala hazo.
Amin'ireo tombokavatsa ireo dia misy dikany sy tandindona samy hafa miaraka, toy ny làlan'ny fanadiovana renirano na renirano ary koa ny tanjaky ny tendrombohitra sy ny fahalehibiazan'ny hazo. Fa toy ny amin'ny zava-drehetra, ny dikany sy ny tandindon'ny tatoazy ala dia miankina amin'ny zavatra niainanao sy ny nanjo anao teo amin'ny fiainana.. Ho hitanao ny tianao holazaina izay mety tsy dia mahafaly sy mampihetsi-po loatra nefa zavatra mahatsiravina sy mampatahotra kokoa ... toy ny fahatahorana irery irery eo afovoan'ny ala nefa tsy fantatra izay alehany, miaraka amin'ny hatsiaka, hetaheta, hanoanana ary maheno feo hafahafa.
Aiza no ahazoana tombokavatsa ala
Ny tatoazy ala, araka ny azonao an-tsaina, dia tatoazy mila toerana sy asa betsaka. Manoro hevitra anao aho fa ny mpanakanto izay hanao ny tatoazy dia matihanina izay mahatonga anao hamorona endrika ekenao alohan'ny hanombohana ny fanaovana tatoazy, amin'izay dia ho fantatrao fa ny sary hanananao amin'ny hoditrao mandrakizay, dia ho sary izay tena tianao sy ankafizinao ny mijery azy hatrany hatrany.
Ity tatoazy ity dia mety ho an'ny lahy sy ny vavy, satria hiankina amin'ny zavatra tianao manokana izany ilay iray izay safidinao amin'ny tatoazy iray na iray hafa. Amin'ny lehilahy dia mahavariana izy io ary amin'ny vehivavy, na dia mety ho kely kokoa aza ny habeny, dia mety ho tena tsara ihany koa.
Ny mahazatra indrindra dia ity karazana tatoazy ity dia atao amin'ny faritra lehibe na lava amin'ny vatana toy ny lamosina, ny feny na ny sandry.
Tatoazy voajanahary hafa
Ankoatra ny tatoazy ala, izay fantatsika rehetra, ny hevitra dia mamela antsika hankafy safidy hafa tena mitombina. Mazava ho azy, tsy ny hevitra ihany fa ny natiora mihitsy no manapa-kevitra. Raha tia an'io ianao, angamba ireto safidy manaraka ireto dia ho tafiditra ao amin'ireo tetikasanao manaraka izay ho tanterahina amin'ny hoditrao.
Ny ala dia iray amin'ireo toerana misy ny fiainana, fa koa ny majika. Ny tantara foronina sy tantara an-tsehatra amin'ny siansa dia azo taratra amin'ny tatoazy toy izany. Amin'ny fomba ahoana? Eny, miaraka amin'ny sarin'ny hazo lehibe kokoa sy mainty kokoa izay ampiana zavaboary amin'ny alina, volana feno na zavaboary ara-panahy.
Ny ranomainty mainty no fototry ny famitana endrika toa izao. Ireo faritra toa ny sandry na ny tongotra no ho canvases tsara indrindra manome fiainana ny hazo mainty sy maina.
Ny fandriampahalemana sy ny fandriam-pahalemana dia toetra roa azo tsoahina amin'ny ttombokavatsa misy tandavan-tendrombohitra. Voalaza fa rehefa te hifidy fialan-tsasatra isika dia tsara kokoa ny mamela azy ireo ho entin'izy ireo, izay manatevin-daharana ny lanitra sy ny hakanton'ny zoro rehetra.
Na ny tanana na ny lamosina na ny feny dia ho lavorary mba hanehoana ny faharetan'ny asa toy izao. Na dia marina aza fa azo ahodina amin'ny faritra toy ny hato-tanana koa izy io, arakaraka ny itiavanao azy.
Tatoazy ala kesika
Ny kesika, na dia manana karazany maro aza isika, mazàna dia lava, lehibe ary ravina. Hatramin'ny andro taloha hazo tian'andriamanitra be. Toy izany koa, na dia ny mananasy aza dia iray amin'ireo mpiady amin'ny lanonana Bacchus sasany. Ka noho izany rehetra izany dia tsy mahagaga raha mbola manatrika eo amin'ny hevitsika ihany koa ny momba ny tombokavatsa.
Ny natiora sy ny fomban-drazana dia hiara-hiaina hanome endrika endrika isan-karazany, nefa miaraka amin'ny kesika hatrany no protagonista. Noho izany dia voafidy faritra lehibe amin'ny vatana koa izy ireo mba hahitana azy ireo amin'ny hakantony rehetra.
Sarin'ny tatoazy an'ala amin'ny sandry
Marina fa mifidy ny volavolany avy ny tsirairay, fa rehefa miresaka momba ny tombokavatsa ala amin'ny sandry isika dia matetika no hita ao amin'ny ampahany amin'ny forearm. Azon'izy ireo atao ny manarona ny faritra misy ny tanana na manodidina azy rehetra. Indraindray isika dia afaka mankafy tatoazy misy loko rano mba hanomezana fiainana bebe kokoa ny endrika tahaka izao na misafidy ranomainty mainty amin'izy rehetra.
Sarin'ny tatoazy an'ala amin'ny tongotra
Raha ny momba ny tombokavatsa ala amin'ny tongotra, dia afaka misafidy ihany koa ianao endrika samihafa ary izany amin'ny ankapobeny dia manarona ny lamosiny izy ireo. Inona no tianao indrindra amin'izy rehetra?
Efa fantatrao ve ny antony itiavanao tombokavatsa ala, ny antony itiavanao azy ary aiza no hanaovanao azy? Lazao anay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy voninkazo sy zavamaniry » Tatoazy ala ho an'ny tia natiora sy fiainana salama
Marina tokoa fa manana ala anaty tanako havia aho ary tsy manam-petra eo amin'ny vozoko miaraka amin'ny teny hoe FIAINANA FIAINANA izay amin'ny teny espaniola dia tiako ny fiainana, ka raha nifanaraka tamin'ny tsy fetezako ny alako dia midika izany fa tiako ny natiora mandrakizay satria misaotra azy misy isika… ..
Robert Medrano dia hoy izy:
Nahazo tatoazy maty maty koa aho 3 volana lasa izay tamin'ny sandriko ankavanana ary raha ny amiko dia nanao ity famolavolana ala maty ity aho satria mandalo dingana amin'ny fiainako izay tsapako fa tena toy izany, maina, tsy manana aina. Ary indraindray hoy izy ireo tamiko fa indray andro any dia hihatsara ny zava-drehetra ary tsy hisy ifandraisany amin'izany ity tatoazy ity fa ny valinteniko dia ny tsy tokony hanadino ireo dingana ratsy eo amin'ny fiainana satria rehefa tadidinao dia rehefa misaintsaina ny tsy fanaovanao zavatra mitovy ianao zavatra indray. lesoka mitovy amin'izany nahatonga anao ho toy izao.
Valiny tamin'i Roberto Medrano
Tatoazy izay mampiakatra ny fahatokisan-tena: ohatra tonga lafatra 5